Ihe ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara na ịkwesighi ịwụnye RAM na batrị optimizers na gam akporo gị | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara na ịkwesighi ịwụnye RAM na batrị optimizers na gam akporo gị
Villamandos | | General, Mobiles
Oge ọ bụla m nwetara Google Play ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ na ụlọ ahịa ngwa ọrụ Google ma m na-enyocha ngwa ndị kachasị ndị ọrụ ibudatara, achọtara m ọtụtụ ngwa na-abaghị uru na-aga n'ihu na-enwe mmeri, na-enweghị oke nkọwa Clear. Offọdụ n’ime ha bụ Ram na ihe njikarịcha batrị, gụnyere Dọkịta Batrị, Master dị ọcha ma ọ bụ 360 Nche, na oge eruola ka ị mara na ha abaghị uru ọ bụla.
Na mgbakwunye na ịkọwa ihe kpatara ya ụdị ngwa ndị a abaghị uru, n'ihi na ọ bụ ihe ekwesiri ịkọwa, anyị ga-agwa gị ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa ị ga - akwụsị ịwụnye ngwa ndị a na ngwaọrụ gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo, nke bụ ebe ha nwere ọnụnọ ka ukwuu.
Nke a na ụdị software, nke dị bụghị naanị n'ihi na mobile ngwaọrụ kamakwa kọmputa, ọmụmaatụ, na-akwalite huu na ha nwere ike mbenata oriri nke ebe nchekwa RAM na ịchekwa batrị nke ngwaọrụ anyị. O di nwute, ihe ngwa ndi a abughi iji belata oriri nke ebe nchekwa RAM, ma obu idobe batrị, kama o bu ihe ozo.
1 Olee otu RAM si arụ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo
2 N'agbanyeghị ihe ọ nwere ike iyi, ọ dịghị mkpa ịwụnye njikarịcha
3 Chefukwa banyere itinye batrị kachasị
4 Kedu nhọrọ ndị anyị nwere?
4.1 Hibernate ndabere ngwa
4.2 Kọwaa ebe nchekwa ahụ
4.3 Gbanyụọ ọrụ ndị na-enweghị isi
4.4 Wụnye ngwa ndị ọzọ
Olee otu RAM si arụ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo
Iji kọwaa ihe kpatara na anyị ekwesịghị ịwụnye ngwa ndị a anyị na-ekwu maka taa, ọ dị mkpa ịmata etu RAM si arụ ọrụ na gam akporo. Typedị ebe nchekwa a, nke a makwaara dị ka ebe nchekwa na-enweghị usoro, bụ nchekwa ngwa ngwa nke na-apụ n'anya ozugbo anyị gbanyụrụ ngwaọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ya iji chekwaa faịlụ ndị a na-eji ugboro ugboro yana ya mere a ga-ebugo ya n'ọtụtụ oge, nke a na-eme ka itinye ngwa ngwa ngwa ngwa.
Na ebe nchekwa a ọtụtụ n'ime usoro ndị a kacha eji eme ihe na-emeghe ma dị njikere iji yana kwa ụfọdụ ngwa anyị ji arụ ọrụ. Google emeela Android iji weghara RAM dị ka o kwere mee, na-akpata ọtụtụ usoro iji na-agba ọsọ na ndabere. Site na ndabara, sistemụ arụmọrụ n'onwe ya na-ahụ maka mmechi mmechi yana obere mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa nchekwa RAM iji mepee ngwa ma ọ bụ usoro ọhụụ.
Dabere na ụdị gam akporo nke anyị rụnyere na ngwaọrụ anyị, njikwa nke ebe nchekwa a ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ obere.
N'agbanyeghị ihe ọ nwere ike iyi, ọ dịghị mkpa ịwụnye njikarịcha
Mgbe ị gụchara, ọ bụ ihe ịtụnanya ikwugharị ọzọ na ọ dịghị mkpa ma ọ bụ ihe amamihe dị na ịwụnye ihe ncheta RAM, nke a makwaara dị ka Onye na-egbu egbu. Ngwa ndị a na-arụ ọrụ site n'ịmanye usoro dị iche iche iji mechie RAM.
Nsogbu bụ na ihe ngwa ndị a mechiri, Android na ndabara reopens ya, na-eme ka ọrụ nke Task Killer na-arụ abaghị uru ma na-egbu oge anyị. Tụkwasị na nke a, nke a na-emebi batrị ahụ ebe ọ bụ na mmechi mmechi na imeghe ha mgbe niile ga-ebelata ya nke ukwuu.
Ọ na-aga n'ekwughị na ngwa ndị a na-eri nnukwu ihe onwunwe na ngwaọrụ anyị, na-emeghe mgbe niile na mbido na ndabere. Ọ bụrụ na ị wụnye ihe karịrị otu, dịka ọmụmaatụ na ekwentị gị, ọ ga-emesị ghọọ ngwa ngwa ngwa ngwa ma sie ike ijikwa.
Chefukwa banyere itinye batrị kachasị
Ngwa ndị na-ekwe nkwa ịkwalite batrị ma melite nnwere onwe nke ngwaọrụ anyị, na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke RAM kachasị mma. Ma nke ahụ bụ Ha na-emechi ngwa na usoro na-arụ ọrụ na ndabere, nke mere na gam akporo ga-emeghe ha ọzọ e mesịa, na nsonaazụ batrị.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchekwa batrị, jiri sistemụ ndị ọzọ, mana etinyerela batrị kachasị n’elu ekwentị gị maka na ị ga - enweta ihe megidere ya, na mgbakwunye na - achọpụta ngwa ngwa nwayọ na ọdụ gị
Kedu nhọrọ ndị anyị nwere?
Dika anyi huworo, adighi akwado ya ka iwunye ngwa na ngwa anyi nke kwere nkwa ikwalite arụmọrụ nke RAM ma obu batrị, mana enwere ụfọdụ nhọrọ iji nwee ike ị nweta ọtụtụ ihe na ngwaọrụ mkpanaka anyị, dịka ọmụmaatụ . Anyị ga-enyocha ole na ole n'okpuru.
Hibernate ndabere ngwa
Ighapu ngwa bu ihe dika ichikota ya ma gbochi ya iwepu ihe ndi ozo ma mebie batrị. Enwere ike imezu nke a site na ngwa, n'etiti nke pụtara ìhè Greenify na nke ga-enye anyị ohere ịwelite ebe nchekwa RAM na batrị anyị. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị njikọ iji budata ngwa a, nke ga - enyere gị aka nke ukwuu, karịa nke ọ bụla n'ime ndị na - ekwe nkwa ebuli RAM na batrị.
Kọwaa ebe nchekwa ahụ
Ebe nchekwa dị iche iche bụ ụdị ebe nchekwa nke a na-echekwa faịlụ ngwa oge, nke nwere ike ịnwe nnukwu gigabytes. Site n'oge ruo n'oge ọ bụ ihe amamihe dị na ya ka ihichapụ ya,, nke ị ga-aga na menu Ntọala, nweta Nchekwa na n'ikpeazụ data echekwara na nchekwa.
Gbanyụọ ọrụ ndị na-enweghị isi
Mgbe ọ na-abịa n'ịchekwa batrị ọ dị mkpa gbanyụọ ọrụ ndị na-enweghị isi nke na-eri ume ma belata ikike nke ngwaọrụ. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ, ị gaghị achọ ka WiFi rụọ ọrụ. The bluetooh ma ọ bụ ọnọdụ ahụ bụ ọrụ ndị ọzọ anyị na-anaghị ejikarị oge niile na-eri ọtụtụ batrị.
Wụnye ngwa ndị ọzọ
Facebook, Twitter na ọtụtụ ngwa ọrụ mgbasa ozi ọha na eze na-eri ọtụtụ akụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere ama ma ọ bụ mbadamba nkume nke ọkara ma ọ bụ dị ala, ọ na-adọrọ mmasị na ị wụnye ngwa ndị ọzọ na-eri obere ego na ngwaọrụ anyị.
You bụ otu n'ime ọtụtụ ndị nwere ngwa awụnyere na nkwa iji bulie RAM ma ọ bụ batrị gị?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara na ịkwesighi ịwụnye RAM na batrị optimizers na gam akporo gị
Ihe niile ị chọrọ ịma iji mepụta ekwentị na-aga nke ọma
Sudio Vasa, ekweisi na oke na izu oke